Sare & Cunto; Sida Loo Helo Gaadiidka Baabuurta ee Google Analytics
Ma aha qalad in la yiraahdo xogta ayaa ah mawduuca guud ee dhammaan ganacsiga internetka iyo go'aamada suuq-geynta. Waxaa muhiim noo ah inaan horumarinno fahamka xogtayada iyo inaan hubinno in ay ku xiran tahay isbedelada suuq-geynta. Waa inaan sidoo kale qiimeynaa dabeecada dadka isticmaala boggayaga internetka oo wax walba oo ku saabsan warshadaha ku wareegsan. Tani waxay suurtagal noqon kartaa marka aan ka saarno taraafikada barta ee Google Analytics iyo diiradda saarista natiijooyinka la rabo - ruby slippers wizard of oz slots.
Alexander Peresunko, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Sartaal , wuxuu soo bandhigayaa siraha suuqyada ee arrintan ku saabsan.
Si loo ururiyo macluumaadka, waa inaad isticmaashaa doorashooyin falanqayn iyo kormeer oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, Google Analytics waa qalabka dhabta ah ee aadka loo isticmaalo. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho sharciyeynta xogtaada oo muujinaysa natiijooyinka saxda ah. In ka badan laba bilyan oo website ah ayaa isticmaala Google Analytics si loo qiimeeyo loona falanqeeyo tayada booqashadooda. Gaadiidku waa wax waxyeelo u geysan kara boggaga internetka wuxuuna kugu dhejin karaa inaad ku dhibto internetka. Ugu dambeyntii wuxuu keenayaa gebogebooyin khaldan, qiimeyn, iyo fikrado, saameeya waxqabadka goobta iyo karti-gelintaada
Dhibaatooyinka wanaagsan waa kuwa u dhaqmaa si wanaagsan, waxayna u fiican yihiin boggaga internetka, halka booti xun ay yihiin kuwa ay abuurtay shabakadaha iyo kuwa weerarka geysta waxayna doonayaan in ay gurguuraan oo ay tusaan website-kooda si sharci-darro ah. Warbixinta ayaa muujinaysa in in ka badan labaatan boqolkiiba dhammaan gaadiidka loo soo diray koofiyadaha wanaagsani ay ka soo gudbaan xagjirnimada iyo khatarta khatarta ah. Sidaa daraadeed waxaan dhihi karnaa in bots ma noqon karaan goobta-saaxiibtinimo kharash kasta oo waa in laga tirtiraa sida ugu dhaqsaha badan.
Laba nooc oo kale oo gaar ah ayaa ah dheelo aan caadi aheyn iyo qadhaadh yaryar. Dhibaatooyinka dabiiciga ah ayaa ah kuwa aan soo booqan boggaaga laakiin waxay muujiyaan natiijooyinka la midka ah, halka qatarta zombie ay yihiin kuwa si buuxda u bixiya boggaaga. Waxay soo saaraan warbixinno Google Analytics ah oo iska dhigaya inay noqdaan kuwo dhab ah. Waxay qorayaan qawaaniinadooda gaarka ah ee ku saabsan xogtaada falanqaynta iyo isku day inaad waxyeello u geysato hal dhinac ama mid kale.
Sidee looga saaraa gaadiidka gawaarida
Google dhawaan ayaa ku dhawaaqday in ay jiraan xalal dhowr ah oo lagu xakamaynayo xeelado wanaagsan, khadad xun iyo sidoo kale spam gudbinta ee Google Analytics. Ujeedadaas awgeed, waa in aad sameysataa fikrado aan saldhig u ahayn oo aad barato ilaha socodkaaga. Waa inaad ogtahay naqshadaha kala duwan ee u dhaxeeya sigaqooyinka wanaagsan iyo dhuunta xun. Waxaad la qabsan kartaa dhowr istaraatijiyooyin suuq-gareeyn si aad ugu badiso fursadahaaga helitaanka aragtiyo gaar ah bogaggaaga. Sidoo kale waa faaiido haddii aad ka sameysid shaandhooyin kala duwan oo ku saabsan ilaha gudaha iyo debedaba. Waxaad xakameyn kartaa dhowr IP-yada oo u muuqda inay shaki ku jiraan oo aysan waxba ka qabin xaqiiqada. Haddii ay jirto xaalad jooti ah, waa inaad ku xardhaa adigoo ogaanaya goobta ay ku yaalaan iyo dabagalka. Tani, waa inaad barataa wax walba oo ku saabsan ilahooda iyo sii wadida tallaabo abuurista raadinta.